Skype desktop app inowana ruzha kukanzura ficha: Maitiro ekuimisikidza panguva yekufona
Yakakurumbira vhidhiyo uye izwi rekusheedzera application Skype yakagamuchira yakaurayiwa yekuvandudzwa uye maficha kubvira pakavharwa chikamu chakakanzurwa mugore rapfuura. Iko kusimbisa kwave kuri pakupa maturusi anoita kuti iro mushandisi izwi uye vhidhiyo ruzivo ruve nani. Ikozvino kambani yakawedzera imwezve minhenga kuheti yayo nekuunza iyo AI-inogonesa ruzha kukanzura ficha kune desktop desktop ye… [Verenga zvakawanda ...] nezve Skype desktop app inowana ruzha kudzima chimiro: Maitiro ekuimisikidza panguva yekufona
5 Nzira dzekugadzirisa YouTube Makomendi Asiri Kuratidzira paVhidhiyo
YouTube, sewebsite uye seapp yakachinja kuburikidza nemakore ese aya, uye zvachinja zvakanyanya kubvira patakatanga kuzviona. Zvisinei, shanduko iyi yese maererano nezvinhu zvitsva, dzimwe nguva vashandisi vachiri kusangana nenyaya dzakadai sekuona-kuverenga kana chiteshi zvakarambidzwa nyaya. Rimwe dambudziko rakadai 'YouTube haina kuratidza' uko chikamu chemashoko chingangonyangarika zvachose kana… [Verenga zvakawanda ...] dzinenge mashanu Nzira dzekugadzirisa YouTube Makomendi Asiri Kuratidzira paVhidhiyo
ne Windows 10, iwe une dzinenge dzisina muganho nzira dzekugadzirisa. Uye Microsoft ikozvino iri kushanda pane chimwe chinhu chemunhu chinoratidza maturusi nemasevhisi zvichienderana nekuti unoronga kushandisa sei chako chishandiso. Kwemwedzi mishoma yapfuura, Microsoft yanga iri mukati kuyedza peji nyowani "Yekushandisa Chishandiso" yeiyo Zvirongwa app iyo yaizobvumidza iyo kambani kugadzirisa… [Verenga zvakawanda ...] nezveMicrosoft inoda kukwidziridza yako Windows 10 mudziyo wezviitiko zvekushandisa
14 Dzinokurumidza Nzira dzekugadzirisa Google Contacts Kwete Kuwiriranisa pane Android
Vari kufona neGoogle vasingabvumirane pane yako Android foni? Zvakanaka, zvakajairika kuve nehukama hwakanangana nenyaya paApple. Vanhu vakati wandei vakataura kuti vokukurukura kwavo vanenge vasiri kuisirwa kuGoogle gore kana kusabvumirana kubva mugore pakutanga. Kana iwe uri kusangana nechero dzakadai nyaya, usanetseke. Muchikamu chino, tichakuudza zviri nyore uye… [Verenga zvakawanda ...] dzinenge gumi nemana Nzira Dzekukurumidza Kugadzirisa Google Contacts Kwete Kuwiriranisa pane Android
Spigen PowerArc ArcStation Pro ongororo: 20W yemagetsi eGaN simba
Gallium nitride (GaN) tekinoroji iri kutyaira shanduko mune diki, inoshanda, yakaderera-tembiricha USB-C majaja. Iwe unozomanikidzwa kuwana yakawanda compact GaN yekuchaja shamwari kupfuura iyo Spigen PowerArc 20W ArcStation Pro yemadziro charger. Ehe, kusarudza chairo chaiko kune ako emagetsi kunobva pane simba rakawanda raunoda pamwe nekutsigira nekukurumidza kuchaja… [Verenga zvakawanda ...] nezve Spigen PowerArc ArcStation Pro ongororo: 20W yeiyo micro GaN simba
Idzi ndidzo dzakanyanya kunaka kesi kune yako nyowani Pixel 4a 5G!
Nepo Google Pixel 4a 5G isiri kuzokunda chero makwikwi erunako, akanakisa Pixel 4a 5G makesi jazz kumusoro iyi inodhura 5G foni. Kuchengetedza mari yako kwakakosha, asi ngatitorei chaizvo. Hupenyu hwakapfupika kuti usabhinha kesi dzenhare. Nekutenda, aya maPixel 4a 5G makesi haana kana chinhu asi uye anowedzera mapopu eruvara uye ekuwedzera kuchengetedzwa kuti foni yako iratidze nyowani nyowani. Keep… [Verenga zvakawanda ...] nezve Aya ndiwo akanakisa kesi echako nyowani Pixel 4a 5G!
Surface Laptop 4 ingangove isingaite AMD Ryzen 5000 processor, inoratidza chiratidzo
Microsoft haisati yamboda kwazvo kuisa mapurosesa azvino mumidziyo yavo, uye zvinoita kunge AMD-powered Surface Laptop 4 ichave mumwe muenzaniso. Benchmark yechigadzirwa chakatumirwa neAPISAK chinoratidza chishandiso chiri kupihwa simba neiyo processor ye AMD Ryzen 7 iyo yava neimwe nguva. Vamwe vanga vachitarisira iyo yazvino AMD Ryzen 5000 processor, yaive… [Verenga zvakawanda ...] nezve Surface Laptop 4 ingangove isingave ne AMD Ryzen 5000 processor, inoratidza chiratidzo
Iyo Apple Watch ndiyo yepamusoro peiyo smartwatch tekinoroji uye vashoma kwazvo vanouya padhuze nekupa chiitiko chinoitwa neAppiz-gizmo. Kupfuura ruzivo, ndiyo ecosystem iyo Apple inotengesa kune vatengi vayo izvo zvaita kuti Apple Watch ive yeakanakisa-anotengesa smartwatches pasi rese. Zvisinei, havazi vese vane homwe dzakadzika zvakakwana kuti vange vachiisa mari muzvigadzirwa zveApple, ndoda… [Verenga zvakawanda ...] nezve Molife Sense 500 smartwatch ongororo: Hauna mari yeApple Watch? Edza izvi panzvimbo
PSA: Gadziridza Yako Apple iOS Midziyo Izvozvi Kuti Patch Anoshanda Vulnerability
Iwe unoziva iro zera-rekare zano rekumirira usati wagadziridza chishandiso, ingangoitika? Ziva izvozvo. Gadziridza yako iPad izvozvi. Gadziridza yako Apple Watch izvozvi. Gadziridza yako iPhone izvozvi. Usatopedza kuverenga chinyorwa ichi; enda unogadziridza zvinhu zvako, wobva wadzoka. Apple yakangoita dambudziko hombe. Apple yakatanga kuburitsa iOS 14.4.2, iPadOS 14.4.2, uye watchOS 7.3.3 nhasi,… [Verenga zvakawanda ...] nezvePSA: Gadziridza Yako Apple iOS Midziyo Izvozvi Kuti Patch Anoshanda Vulnerability
Microsoft iri kuronga yakanaka yekuona yekuvandudza ye Windows 10 muhafu yepiri yegore rino. Iyo inonzi "Sun Valley" yekuvandudza yatove mukuyedza nayo Windows 10 Vapindiri, uye iyo yazvino kuvaka inounza pamwe dzinoverengeka dzakagadziriswazve folda mifananidzo ichibva paFluent Dhizaini Kana iwe uchida izvi zvidhori izvozvi unogona zvirokwazvo kuve Insider, asi izvo hazvisi chaizvo… [Verenga zvakawanda ...] nezve Iyi nzira yekuwana Windows 10 Sun Valley mifananidzo ikozvino isina kuve Insider